UkuThengiswa kweFowuni kwiShishini loRhwebo | Martech Zone
UkuThengiswa kweMfono kwiShishini loRhwebo
NgoLwesibini, Oktobha 22, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Iselfowuni kunye nokuthengisa kwakhona kuyaqhubeka nokubonelela ngetoni yamathuba kubathengisi ukuphucula ixabiso labathengi kunye nokonyusa ukuthembeka- ekugqibeleni ukuqhuba ukuthengisa. Iindlela ezilula ezinje Imiyalezo yeSMS baneempembelelo kakhulu kumanqanaba okuphendula. Izisombululo eziphambili ngakumbi njenge izicelo zeselula inokuphucula amava okuthenga kubathengi.
Dynmark yinkampani yobukrelekrele belifu esekwe e-UK kunye nenkampani yemiyalezo. Babeke ndawonye le infographic ebonelela ngamanani anamandla okuxhasa iinzame zakho zokuthengisa ngentengiso ngokusebenzisa itekhnoloji yeselfowuni.
tags: i-dynmarkusetyenziso lweselulaurhwebo mobileIvenkile yokuthengisa eselfowuniIvenkileishishini lokuthengisaukuthengisai-SMSimiyalezo ebhaliweyo
Intengiso ye-imeyile yokugqibela ye-Cheatsheet
Iqonga lakho lokuThengisa alichanekanga njengoko ucinga
Oktobha 23, 2013 ngo-1: 04 PM
I-infographic entle, enkosi ngokwabelana ngayo noDouglas. Ndiyifumana iluncedo ingcebiso yokugqibela abayinikayo ekugqibeleni "ukuthengisa okuhlakaniphile kuya…". Imarike yeselula iqinisekile ibonelela ngamathuba amahle kwixesha elizayo kwabo banezakhono ngokwaneleyo zokusebenzisa.